Simba remhepo rinobuda
Nekuti simba remhepo harina kugadzikana, kuburitswa kwemagetsi emagetsi jenareta ndeye 13-25V inoshandura yazvino, iyo inofanirwa kugadziriswa nechaja, uye ipapo bhatiri rekuchengetedza rinobhadhariswa, kuitira kuti simba remagetsi rinogadzirwa nemhepo jenareta yemagetsi ive kemikari simba. Wobva washandisa inver ...
Nheyo dzeMhepo Simba
Kuchinja simba remhepo kuita simba remagetsi, uye nekushandura simba remagetsi kuita simba remagetsi, ino ndiyo simba yemhepo. Nheyo yekugadzirwa kwesimba remhepo ndeye kushandisa mhepo kutyaira iwo mahwindimiri mashizha kutenderera, uyezve kuwedzera iyo ...
Basa remhepo turbine
Vanhu vazhinji vanobvunza kuti basa rei turbine yemhepo + inodzora. Muchokwadi, aya ma module maviri anoumba yakatsiga uye nehungwaru mhepo yekugadzira magetsi system, iyo inogona kushandisa zvizere simba remhepo kugadzira magetsi. Iyo midziyo inogona kunyatso shandura simba remhepo kuita simba remagetsi. Iyo batt ...
Mhepo-rezuva chemasanganiswa mwenje mwenje
Nekuti dzimwe nguva mamiriro ekunze muhupenyu anosiyana, mamiriro ekunze anochinja sezvaanochinja, uye mumwaka yakasiyana, mamiriro ekunze anosiyanawo. Kuvabvumidza kuti vashandiswe zvakajairika, dzimwe nguva isuwo tinofanirwa kufunga zvimwe zvinokonzereswa nemamiriro ekunze nemamiriro ekunze. Kana mamiriro ekunze akakanganisa t ...
Njodzi uye kudzivirira kwemarudzi eprojekti emagetsi emagetsi
Wind Power Network Nhau: Iyo "Belt neMugwagwa" danho rakagamuchira mhinduro dzakanaka kubva kunyika dziri munzira. Semugadziri mukuru wepasi rose uye mutengi wesimba rinowedzerwazve, China iri kuwedzera kutora chikamu mukudyidzana kwemagetsi emagetsi epasi rese. ChiChinese...
Ongororo yeMhepo Simba Gear Kurongeka Kwekubatanidza
Kutenderera kweGear ndiyo inonyanya kukosha nzira yekufambisa kufamba uye simba mumagetsi emagetsi emagetsi. Kushanda kwaro kushanda, kutakura chinzvimbo, hupenyu hwebasa uye kushanda kwakaringana zvakabatana nehunhu hwekutapurirana kwegear. Kutapukisa mhando giya hutachiwana kunyanya depen ...
Sei zvichidhura zvakanyanya kune vakawanda vekumaruwa kutora magemhu emhepo?
Zvino nekuenderera kuri kuita kukura kwenguva, kusimudzira kwenzvimbo dzekumaruwa zvakare kuri kukurumidza kwazvo. Semuenzaniso, kana vanhu vazhinji vanogara kumaruwa vachida kushandisa kwavo zvirinyore, vazhinji vacho vanozoshandisawo turbine dzemhepo nekuda kweiyi Imwe yekushandisa inogona kukuita iwe unowedzera kudhura ...
Tsvagiridzo yeFault Kuongorora uye Hutano Kuongorora kweMhepo Simba Midziyo
Wind Power Network Nhau: Abstract: Iri bepa rinoongorora mamiriro azvino ekuvandudzwa kwekukanganisa kuongororwa uye kutariswa kwehutano hwezvinhu zvikuru zvitatu zviri mumhepo turbine drive cheni - macomposite blades, magiya emabhokisi, uye majenareta, uye inopfupisa izvozvi mamiriro ekutsvagisa uye makuru aspec ...
Kushanda kwemhepo purazi yakatsaurwa chaiyo-nguva dhata gedhi mumaindasitiri Internet kuwana
Iko kushanda uye manejimendi emapurazi emhepo anofanirwa kutevedzera zvinodiwa neNational Energy Administration uye iyo State Grid yekuchengetedza kwemagetsi ekugadzira network. Chinhu chikuru ndechekuti gadzira manejimendi manejimendi yemhepo purazi yakakamurwa kuita nhatu nzvimbo dzekuchengetedza accordi ...
Flexible DC grid-yakabatana tekinoroji inobatsira yekumahombekombe simba remhepo kuenda kune yakadzika mvura uye yakavhurika gungwa
Wind Power Network Nhau: Mhinduro inosarudzika yekubatana kwegridhi yakavimbika yemhepo yekumhiri kwemhepo. Dzakajairika hunyanzvi nzira dzekunze kwemhepo simba gridhi yekubatanidza inosanganisira yakajairwa AC kutapurirana, yakaderera-frequency AC kutapurirana, uye inoshanduka DC kutapurirana. nyika yangu yekutanga kushama ...
Zvinodikanwa uye zvakatemwa zvekukwirisa kwemagetsi kuburikidza nehunyanzvi hwemagetsi emhepo kumba nekune dzimwe nyika
Wind Power Network Nhau: Nekukurumidza kukura kweiyo DC yekufambisa tekinoroji, kuchengetedzeka kwayo, kugadzikana, uye mashandiro arikutarisana nematambudziko akakurisa, kunyanya kukwirira kwemagetsi emagetsi emagetsi emagetsi munzvimbo yeDDC kufambisa kwave kutarisa kwekutarisa. Kuti uwedzere ...
Kiyi Hook Murongi, Dyara Pot Hanger, Simbi Madziro Art, Wall Hanging Kudyara Bhureki, Makiyi Ekubata Hook, Necklace Holder Ratidza,